ch 14 လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 14 လုကာ
14:1 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ယရှေုသညျမုန့်ကိုစားရမှဥပုသ်နေ့၌ဖာရိရှဲအချို့တို့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏အိမ်တော်သို့ ဝင်. လာသောအခါ, သူတို့ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြ.
14:2 ထိုအခါ, သူ့ရှေ့မှာလူတယောက်သည်ဖောနှင့်အတူညှဉ်းဆဲခံခဲ့ရ.
14:3 ထိုအကိုတုံ့ပြန်, ယရှေုသညျပညတျတရားအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများကရန်နှင့်ဖာရိရှဲတို့အားဆင့်ဆို, ဟုဆို, "ဒါကြောင့်ဥပုသ်နေ့၌ပျောက်ကင်းစေအပ် Is?"
14:4 ဒါပေမဲ့သူတို့ကတိတ်ဆိတ်စွာနေ. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သူ့ကိုကိုင်ယူပြီး, သူ့ကိုအနာကိုငြိမ်းစေခြင်းနှင့်ပယ်ရှားစေလွှတ်တော်မူ.
14:5 ထိုအခါသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ရန်, ဟုသူကပြောသည်, "သင်ဘယ်တစ်ဦးသည်မြေတွင်းထဲသို့မြည်းဒါမှမဟုတ်နွားကိုကျဆုံးခြင်းရှိသည်လိမ့်မယ်, နှင့်ချက်ချင်းသူ့ကိုဆွဲထုတ်မည်မဟုတ်, ဥပုသျနေ့၏နေ့၌?"
14:7 ထိုအခါသူလည်းတစ်ဦးပုံဥပမာကိုသို့ပြောသည်, ဖိတ်ခေါ်ခံရတယ်သောသူတို့အဖို့, သူတို့စားပွဲမှာပထမဦးဆုံးထိုင်ခုံကို ရွေးချယ်. ဘယ်လောက်ကိုသတိပွုမိ, သူတို့ကိုဟု:
14:8 "သင်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြသောအခါ, ပထမဦးဆုံးဌာန၌ထိုင်ကြပါဘူး, ဖြစ်ကောင်း စိုးရိမ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထက်ပိုဂုဏျတစ်စုံတစ်ဦးကသူ့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ကြပေမည်.
14:9 ပြီးတော့သူကသင်နှင့်သူ့ကိုနှစ်ဦးစလုံးခေါ်တော်မူသော, ချဉ်းကပ်, သငျသညျဆိုသညျကားစေခြင်းငှါ, '' ။ အထံတော်သို့ဤအရပ်ဌာနကို Give '' ပြီးတော့သင်ကိုစတင်မယ်လို့, ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်, ပြီးခဲ့သည့်ရာအရပျယူ.
14:10 သင်တို့မူကားကိုဖိတ်ကြားကြသောအခါ, သွား, အနိမ့်ဆုံးဌာန၌ထိုင်, သောကြောင့်, သငျသညျကိုဖိတ်ကြားသောသူမူကားရောက်ရှိလာသောအခါ, သူသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်စေခြင်းငှါ, '' မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း, ပိုမိုမြင့်မားထသွားပါလော့။ '' ထိုအခါသင်သည်အတူတူသင်တို့နှင့်အတူစားပွဲ၌ထိုင်သောသူတို့သည်ရှေ့တော်၌ဘုန်းအသရေရှိလိမ့်မည်.
14:11 မိမိကိုမိမိချီးမြှောက်သောသူမည်သည်မ့်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်, အကြင်သူသည်မိမိကိုမိမိနှိမ့်ချချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ "
14:12 ထိုအခါသူလည်းသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခဲ့သူတကလည်း,: "သင်ကနေ့လယ်စာသို့မဟုတ်ညစာပြင်ဆင်မည်လိုက်တဲ့အခါ, သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖုန်းဆက်ဖို့ရှေးခယျြဘူး, သို့မဟုတ်သင်၏အစ်ကိုတို့, သို့မဟုတ်သင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများ, သို့မဟုတ်သင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝအိမ်နီးချင်းများ, စိုးရိမ်. ဖြစ်ကောင်းသူတို့ထို့နောက်သင်တို့အားဖန်ဆင်းတော်မယ်လို့ပြန်လာနှင့်ပြန်ဆပ်၌သင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်စေခြင်းငှါ,.
14:13 သင်တို့မူကားတစ်ဦးခံရသောပွဲပြင်ဆင်မည်အခါ,, ဆင်းရဲသောသူကိုခေါ်ခြင်း, မသန်စွမ်းသူများအတွက်, အခြေဆွံ့သေ​​ာသူ, နှင့်မျက်စိကန်းသော.
14:14 သူတို့သည်သင့်ပြန်ဆပ်ဖို့တစ်လမ်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကြောင့်သင်မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်. သို့ဖြစ်., သင့်ရဲ့အကျိုးကိုအရုံ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ "
14:15 သူနှင့်အတူစားပွဲ၌ထိုင်လျက်တစ်စုံတစ်ဦးသည်ဤအရာများကိုကြားလျှင်, သူ့ကိုအားဆို၏, "မင်္ဂလာသညျဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျော၌မုန့်ကိုစားရကြလိမ့်မည်တော်မူသောသူဖြစ်၏။ "
14:16 ဒါကြောင့်သူ့ကိုမှပြောကြားပါတယ်: "လူတယောက်နျပွငျဆငျပှဲကွီး, သူကအများအပြားကဖိတ်ခေါ်.
14:17 နှင့်မိမိကျွန်ကိုစလှေတျ, ပွဲခံရာအချိန်နာရီ, လာရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်ကိုပြောပြရန်; ယခုအဘို့အရာရာကိုအဆင်သင့်ခဲ့.
14:18 နှင့်တပြိုင်နက်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ဆင်ခြေလုပ်စတင်ခဲ့. ပထမဦးဆုံးသူ့ကိုရန်ကဆိုသည်: '' ငါကလယ်ယာကိုဝယ်ယူ, ငါထွက်သွားနှင့်မြင်ရဖို့လိုအပ်. ကျွန်မကို excuse ရန်သင့်အားမေးကြည့်ပါ။ ''
14:19 နှင့်အခြားကပြောပါတယ်: '' ကြှနျုပျသညျနှားငါးယဉျကိုဝယျယူ, ငါသည်လည်းထိုဆန်းစစ်ဖို့သွားပါ၏. ကျွန်မကို excuse ရန်သင့်အားမေးကြည့်ပါ။ ''
14:20 နှင့်အခြားကပြောပါတယ်, '' ငါဇနီးတစ်ယူကြပြီ, ထို့ကြောင့်ငါသွားနိုင်ခဲ့ဘူး။ ''
14:21 ထိုအပြန်လာသော, ကျွန်သည်မိမိသခင်မှဤအမှုတို့ကိုဖော်ပြသည်. ထိုအခါမိသားစုတစ်စု၏ဖခင်, အမျက်တော် ထွက်. ဖြစ်လာ, မိမိကျွန်အားဆို၏: '' မြို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာနှင့်ရပ်ကွက်သို့လျင်မြန်စွာထွက် Go. ဒီမှာဆင်းရဲသောသူကိုဦးဆောင်, နှင့်မသန်စွမ်းသူ, နှင့်မျက်စိကန်းသော, နှင့်ခြေဆွံ့သေ​​ာသူ။ ''
14:22 ထိုအကျွန်ကပြောပါတယ်: '' ဒါဟာလုပ်ဆောင်ခဲ့, သငျသညျအမိန့်ပေးသကဲ့သို့, အရှင်သည်, နှင့်အခန်းတစ်ခန်းရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ''
14:23 ထိုအခါအရှင်သည်ကျွန်အားဆို၏: 'အအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်ခွံမှထွက် Go, ရိုက်ထည့်ရန်သူတို့ကိုမင်းဇော်, ဒါကြောင့်ငါ့အိမ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်း.
14:24 ငါသည်သင်တို့အဘို့အပြောပြပါ, ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်တဲ့သူတွေယောက်ျား၏အဘယ်သူအားမျှငါ့ယဇ်မြည်းစမ်းကြလိမ့်မည်။ ''
14:25 အခုတော့အလွန်ကြီးစွာသောလူအုပ်ကြီးသူ့ကိုနှင့်အတူခရီးထွက်. ထိုအလှညျ့, သူတို့ပြောဆို:
14:26 "မည်သူမဆိုငါ့ထံသို့လာလျှင်အ, နှင့်သူ၏ဖခင်မမုန်းပါဘူး, နှင့်မိခင်, နှင့်ဇနီး, နှင့်ကလေးများ, နှငျ့ညီ, အစ်မတွေ, ဟုတ်ကဲ့, ပင်မိမိအသက်ကို, ထိုသူသည်ငါ့တပည့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်မဟုတ်.
14:27 အကြင်သူသည်မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုသည်းခံကြ၏နှင့်ငါ့နောက်မလာပါဘူး, ငါ့တပညျ့ဖြစ်နိုင်ပါသည်မဟုတ်.
14:28 အဘယ်သူသည်သင်တို့အထဲမှ, တစ်ဦးရဲတိုက်ကိုဆောက်လုပ်ဖို့လို, ပထမဦးဆုံးထိုင်လိုအပ်သည်သောကုန်ကျစရိတ်များမဆုံးဖြတ်မယ်လို့, သူကဖြည့်စွက်ဖို့နည်းလမ်းရှိပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့?
14:29 ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သူကအုတ်မြစ်ချခြင်းနှင့်ပြီးအောင်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်, ဒါကြောင့်မြင်တော်မူသောလူတိုင်းကသူ့ကိုကဲ့ရဲ့မှစတင်ဖို့နိုင်ပါသည်,
14:30 ဟုဆို: '' ဤသူသည်သူမသတ်နိုင်ခဲ့တယျစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ''
14:31 သို့မဟုတ်, ဘာကိုရှငျဘုရငျကို, ရှင်ဘုရင်တပါးကိုစစ်တိုက်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ချီတက်လာ, ပထမဦးဆုံးထိုင်တော်မမူနိုင်စေခြင်းငှါရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်, တသောင်းနှင့်အတူ, နှစ်သောင်းနှင့်အတူသူ့ကိုဆန့်ကျင်လာသောသူတယောက်ကိုနှင့်တွေ့ဆုံရန်?
14:32 မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့, ထို့နောက်အခြားအအဝေးမှာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားပေးပို့ခြင်း, သူငြိမ်သက်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များအဘို့သူ့ကိုမေးမြန်းလို.
14:33 ထို့ကြောင့်, သူပိုင်ဆိုင်သမျှသောစွန့်ပယ်သည်မဟုတ်သူကိုသင်တို့အလူတိုင်းကိုငါ့တပည့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်မဟုတ်.
14:34 ဆားသည်ကောင်း၏. But if the salt has lost its flavor, with what will it be seasoned?
14:35 It is useful neither in soil, nor in manure, so instead, it shall be thrown away. နားထောငျနားကိုသူမည်သည်ကား, ကြားပါစေ။ "